Ukuthenga A Mountain Bike Guide - Izindaba Rule
Ukuthenga A Mountain Bike Guide
Kungaba kancane kungakhungathekisa kanye isikhathi uma uthenga bike mountain.
ngezansi, uzothola ezinye amathiphu kanye izinto baqaphe phambi kwakho ubeke phansi ukheshi kanye ukuthenga ibhayisikili mountain.
Ukunquma intengo yakho
Kukhona awapheli ingakanani imali ungachitha a bike entsha entabeni ngempela. Ukuze sikusize ukugcina imali yakho ngaphansi kolawulo, kufanele wazi ukuthi yini intengo yakho Ibanga futhi kungakanani uzimisele yakho ukuze ukhokhele ibhayisikili elisha.
Uma uthenga, wena akufanele ukuthenga merchant mass ezitolo ezifana Wal-Mart. Kufanele esikhundleni yeseka yakho bike esitolo bese ibhayisikili uncono kakhulu futhi service kangcono okuningi.
Ukuthola isitayela sakho
Zonke emabhayisikili entabeni zenzelwe eziningana ezahlukene ogibele izitayela kanye nezinhlobo isimo sezwe engqondweni. Uzodinga ukuba wazi ukuthi yini uhlobo egibele uzokubheka lokho abakwenzayo kunazo. Smooth ogibele, cross country racing, entabeni Cruising, noma lift efinyelelwe ekwehleni uyinto udinga ukuthola. Qinisekisa ukuthi ibhayisikili oyikhethayo elifanele isitayela sakho siqu, hhayi abasebenzi ukudayiswa sika.
ukumiswa Full noma umsila kanzima
Uma ungakwazi ukukhokhela it, a full bike ukumiswa entabeni enjalo kuwufanele ukuthenga. A umsila kanzima, ngaphandle ukumiswa ezingemuva, kuba ilula okuningi futhi isinyathelo kalula, nakuba ukumiswa umnyuziki siduduze more and control jikelele kangcono. Uzoba bafuna ukwenza leso sinqumo esisekelwe intengo yakho uhla, ogibele isitayela, kanye nohlobo sendawo uzonikwa egibele kakhulu.
Ukuthola izintandokazi zakho
Eqhathanisa entabeni emabhayisikili uphiko ukuba uphiko kucishe kungenzeki, njengoba kukhona inhlanganisela abaningi kakhulu ezitholakalayo. Indlela engcono kakhulu yokwenza lokhu ukwenza ukuthola umngane izingxenye ezimbalwa ukuthi yizona ezibaluleke kakhulu kuwe futhi ekuqinisekiseni okunye noma ubuncane kuwela ngaphakathi komqondo intengo yakho uhla. Ungaqala nge ekuphambukeni ke sibheke amasondo derailleur ezingemuva.
Phakathi nonyaka, amanani entabeni emabhayisikili lingashintsha impela kancane. Spring ngokusebenzisa ihlobo main ukuthenga isizini. Uma ungakwazi ukulinda kuze intengo kwesokudla pops up, kuvamise ekwindla nasebusika, ungagcina namashumi umbhangqwana zamaRandi. Ziningi izitolo bike uyophinde anikele izaphulelo noma nezinye izesekeli uma ukuthenga kubo.
Ukuthola umdayisi omuhle
Ukuthola omuhle bike umdayisi into ebaluleke ukwedlula kokuthola intengo engcono. Kufanele njalo uthole umdayisi ukuthi uyabakhathalela kabanzi mayelana ukuthengisela ibhayisikili omkhulu ukwedlula ukuthengisela eqolo ontengo yakhe yayinqunyiwe. A nomthengisi enkulu bayoba yokulungisa ihlanzekile futhi akunike umbono wokuthi ungakwazi ngempela ukubethemba.
Kufanele avivinye ukugibela amabhayisikili abaningi ngangokunokwenzeka ngaphakathi intengo yakho uhla futhi ogibele isitayela.
Uzothola ukuthi abanye emabhayisikili uyozizwa kwesokudla, kuyilapho abanye ngeke. I emabhayisikili more ungakwazi ukuhlola, kangcono uzoba uqonde ukuthi yini esebenzayo, yini hhayi.
Izibuyekezo Product futhi bike nokubuyekezwa ezinye zezindlela engcono kakhulu yokuthola impendulo mayelana entabeni emabhayisikili nokwethenjelwa kanye nokusebenza jikelele. Kufanele ngaso sonke isikhathi ukubheka ukuthi nabanye abanikazi kanye nokubuyekezwa icabange ibhayisikili phambi wenze ukuthi ukuthenga kokugcina.
The Perfect Isikhathi Sonyaka Yokwenza 10 lokuthengiwe Big
20 best iPhone and iPad zokusebenza nemidlalo kuleli sonto
15162	0 Ibhayisikili, Cycling, Derailleur amagiya, Electoral esifundeni (Canada), Mountain bike, ugibele ibhayisikili, Ezemidlalo, Walmart
← Meet Jack Russell Terrier inja One Pack tattoo – Ukukha Dream Yakho Design →
Microsoft Iqalisa ezincane, Surface Hamba angi iPad